३ कुरा जुन बार्सिलोनाले हुएस्का विरुद्धको ड्रबाट सिक्यो !! च्याम्पियन लिगलाई फाइदा के ?? - Experience Best News from Nepal
३ कुरा जुन बार्सिलोनाले हुएस्का विरुद्धको ड्रबाट सिक्यो !! च्याम्पियन लिगलाई फाइदा के ??
हुएस्का विरुद्धको खेलमा बार्सिलोनाले ड्र खेल्यो । बार्सिलोनाका प्रथम रोजाईलाई भने विश्राम दिइएको थियो । हुन् त टाइटल ला लिगा बार्सिलोनाको पोल्टामा छ भन्दा फरक नपर्ला तर हुएस्कासंगको ड्र भने त्यति स्वादिस्ट थिएन । बार्सिलोनाका युबा खेलाडी हुएस्का माथि हाबी हुन सकेको देखिएन । यधपी बार्सिलोनाका निम्ति ठुला टाइटल जित्नु चरम प्राथमिकता हुन सक्छ, मेस्सी, स्वारेज बार्सिलोनाको उक्त खेलमा थिएनन् ।
उक्त खेलबाट बार्सिलोनाले अब के सिक्ने त ?
१) बार्सिलोनाबाट खेल्दै गरेका युवा खेलाडीको भबिस्य उज्जल छ : शंका नै छैन्, बार्सिलोनामा युबा खेलाडीको भबिस्य उज्जल छ, एर्नेस्टो भल्भार्डेले नया खेलाडीलाई प्रथम पटक मैदानमा उतारेका थिए । मौसा वेगु, तोडिबो, पुइगले प्रथम ला लिगा खेल खेले साथै एलिनाले समेत खेल देखाउने मौका पाए । माल्कम र डेम्बेलेको मैदानमा रहनुले बार्सिलोनाको पूर्ण युवा टिम भएको देखियो ।
प्रतिद्वन्दीको घरेलु मैदानबाट तिन अंक भने जान दिएनन् साथै युवा टिमको साथ् बार्सिलोनाले ला लिगामा अर्को क्लिन सिट दर्ता गर्यो जुन निकै महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो । तोडिबोको खेलमा रहेको धैरेता एबं पुइग, वागुईको आगामी खेल यात्रा कस्तो होला भन्ने बार्सिलोनामा थोरै समय यता चलेकै थियो नै साथै उक्त खेलमा यी डेबू खेलाडीको खेल निकै प्रसंसनीय बन्यो । पुइग क्याम नाउका स्टार बन्ने आकडा बार्सिलोनाले गरेको छ ।
२) बोटेंग बार्सिलोनाका निम्ति त्यो सार्है उत्कृस्ट होइनन्: ठुला खेलमा स्थान पाएका छैनन्, पाएका खेलमा राम्रो पदर्शन गर्न नसकेका प्रिन्स बोटेंग जनावरीमा लोनमा बार्सिलोना प्रवेश गरेका थिए । भल्भार्डेले बोटेंगलाई स्वारेजको स्थानमा दोश्रो पटक बार्सिलोनाको खेलमा स्थान दिएका थिए र उनको खेलले प्रशिक्षकले किन उनलाई मैदानमा उतार्न चाहंदैनन भन्ने पुस्टि हुन्छ ।
उनको स्थानमा अर्का खेलाडी एबेल रुइजलाई दिइने योजना समेत विफल बन्यो । स्वारेजको विकल्पमा बोटेंगलाई बार्सिलोनामा ल्याइएको थियो तर फलत बोटेंग बार्सिलोनामा उब्जाउ बन्न सकेका छैनन् । उनको पुन सासुवालो फर्किने फर्किने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
३) बार्सिलोना युनाइटेड विरुद्धको खेलका निम्ति विल्कुल ताजा देखिनेछ: भल्भार्डे आलोचित थिए, आखिर किन खेलाडीहरुलाई आराम दिइएको छैन- फलत उनले युवा खेलाडीलाई स्थान दिए, ठुला खेलाडी जो चाडै च्याम्पियन लिग दोश्रो लेग खेल्ने छन् उनिहरुलाई विश्राम दिईयो । उक्त तबरले बार्सिलोनामा नयाँ जोस र ताजापन बढ्ने छ । विशेष अट्याक र डिफेन्सलाई निकै विश्रामको जरुरी थियो । प्रशिक्षकले कौटिन्हो, आर्थुर, अल्बालाई अतिरक्त खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गराएका थिए ।
उक्त खेलमा सिर्फ एक स्थितिको गुनासो रहयो कि बार्सिलोनाले जितको गोल गर्न भने सकेन ।
बार्सिलोनाले गरेको हर योजना ठुला खेलका लागि, नया खेलाडीलाई स्थान दिन र टिमलाई विश्रामको राहत दिलाउन थियो ।
इभान राकिटिक: मैले अर्को पासपोर्टको बिषयमा सोधेको छैन !!
फाइनल बार्सिलोना विरुद्ध जिरोना !! कहिले र कहाँ हुदै छ खेल
११ जुलाईमा बार्सिलोनाले अन्तत ग्रिजम्यानलाई बार्सिलोनामा अनुबन्धित गर्ने !! डी जोंग ५ मा
आज राति बार्सिलोनालाई शीर्ष स्थानमा अग्रता बढाउने अवसर
६ मिलियनमा रोमा नगए हिगोइनको पारिश्रमिक घटेर युभेन्ट्समा मात्र ४ मिलियन हुने
फेरी रोनाल्डो बालोन डी’ओरको प्रमुख दावेदारको सुचीमा !!
२०१०-११ देखि कति पटक जिते मेस्सीले म्यान अफ द म्याच !! प्रतिद्वन्दी रोनाल्डोको कति ?
मेस्सीलाई अपमान गर्ने बेटिसका यी खेलाडीलाई बार्सिलोना ल्याउन लगाए रोक !!